Mpanamboatra flange jamba tsara indrindra | Puyang
Ny lahasa lehibe ataon'ny flange jamba dia ny mampisaraka tanteraka ny atody famokarana. Izay manakana ny vavahady mihidy tsy hanidy akaiky, avy eo misy fiantraikany amin'ny famokarana, ary miteraka lozam-pifamoivoizana mihitsy aza.
Amin'ny toerana misy izany dia mitaky fitokanana dia tokony hametraka ny flange jamba, toy ny amin'ny nozongo fitaovana. Eo anelanelan'ny anoloana sy aorian'ny valizy mihidy na eo anelanelan'ny flanges roa dia matetika no amporisihina hampiasa flange jamba 8 (sary-8 banga); Ho an'ny faritra tokana ampiasaina toy ny fanindriana sy fanadiovana dia matetika mampiasa flange jamba boribory mahazatra.
Karazana fanamboarana sy karama
Amin'ny ankapobeny dia manana karazany efatra: ny forging, casting ary forging, fanapahana lovia antonony, casting, ny vidin'ny vokatra forging no avo indrindra, ny plate plateau no faharoa, ny casting sy ny forging no ambany indrindra ary ny casting no dingana ratsy indrindra raha ampitahaina amin'ny hafa.
1. 10 taona mifantoka amin'ny flange
2. 15 andro amin'ny fandefasana ara-potoana
3. 24 ora amin'ny serivisy an-tserasera
4. Kalitaon'ny flange vy tsy misy fangarony
5. Manana orinasa fananganana hosoka
Manana orinasam-panamboarana manokana izahay, manana fitaovana teknika avo lenta sy fitaovana fanandramana, 4 / T, 1.75T, 1 / T, palma rivotra 0.75 / T, fatana famonoana hafanana mandeha ho azy, lafaoro fitsaboana hafanana, latina nafarana CNC, milina fitrohana tsofa.
Manaraka: Sary 8 Flange Flange